Cranked Hyperlink Double - onye nrụpụta ike na Singapore pte ltd
Chain Roller nkenke, Akụkụ na Njikọ Njikọ
Ngwongwo nchara nchara dị ezigbo mma ma na -enye echiche dị ukwuu nke na -ebunye ike eletriki eletriki, nke, n'ime ọzụzụ nke ngwa ụlọ ọrụ, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile.
ụdị agbụ ndị ọzọ ejiburu.
Elu Hyperlink - Pịa Egwuregwu (BS / DIN) Riveting Pin Hyperlink - Pịa Match (ANSI)
Maka iji nha na ụdị yinye niile ebe achọrọ nchekwa kacha mma. A na -enye njikọ ahụ na ntụtụ pin na -abanye n'otu efere dị n'èzí. Efere ọzọ dị n'elu bụ n'ezie nnyonye anya dabara na ntụtụ na -ebu, nke a ga -agbarịrị ngwụcha ya n'elu ngwa ngwa ka etinyere efere ahụ. A ga -eji njikọ njikọ njikọ dabara adaba naanị otu ugboro; a ga -eji njikọ ọhụrụ gbanwere hyperlinks ndị etisasịworo. (Lee 'Riveting Chain Endless' maka ntuziaka zuru ezu).
Ijikọ njikọ - Egwuregwu Egwuregwu (BS / DIN / ANSI)
A na -enye njikọ njikọ njikọ nwere mkpọ abụọ ejikọtara na efere elu. Efere dị n'elu bụ n'ezie ihe dabara adaba na njikọ njikọ ya, a na -echekwa ya n'ọnọdụ site na ntụtụ kewara ya na ngwụcha ngwụcha nke ntụtụ njikọ ọ bụla.
Ijikọ Hyperlink - Slip Match (BS/DIN/ANSI)
A na -eji ya naanị n'agbụ olu dị mkpirikpi. N'inye ya ntụtụ abụọ jikọtara na efere dị na mpụta, a ga -echekwa efere na -ejikọ nke ọma site na obere oge opupu ihe ubi, Nọmba 27, nke na -abanye na oghere mgbe ọ na -atụ.